FANAHAFAHANA IREO VOALAZA FA MPANGALA-JAZA : Hisy fidinana an-dalambe ao Toamasina
Hakiviana ny an’ny polisy ao Toamasina taorian’ny fahazoan’ireo olona miisa enina voarohirohy tamina raharaha hala-jaza tao Toamasina fahafahana vonjimaika teny amin’ny fitsarana, ny tolakandron’ny talata 6 marsa lasa teo. 8 mars 2018
Raha tsiahivina, dia niainga avy tamina hafatra fohy tamin’ny finday (sms) fa mitady mpividy zaza no niaingan’ny polisy misahana ny heloka bevava nikaroka an’ireo olon-dratsy. Ny sabotsy 3 marsa, voasambotra tao Androranga sy Bazary Be ny olona miisa fito ao anaty tambajotra.
Araka ny fanazavana nentin’ny Kaomisera Raelison Gerverin, dia niaiky ny heloka vitany izy enina mianadahy nandritra ny famotorana natao ary mbola nanamarina izany ireo hafatra hita tao anaty finday. Ny tolakandron’ny talata 6 marsa teo no niakatra Fampanoavana izy enina voarohirohy ary nahazo fahahana vonjimaika avokoa.
Niteraka resabe teo anivon’ny polisy tao Toamasina io raharaha io. Lasa resaka teny anivon’ny fiarahamonina rehetra teny ary tonga ady hevitra mafotaka tao anaty tambajotra sosialy. Maro no tsy faly tamin’ny fahazoan’izy ireo io fahafahana vonjimaika io. Voakiana mafy ny fitsarana. Manoloana izany indrindra, miparitaka ao anaty tambajotra sosialy ny fitaomana olona hidina an-dalambe hitaky fanovàna fomba fiasa ao amin’ny Fitsarana.
Ny volana febroary lasa teo, dia efa nisy raharaha niteraka fanafintohinana olona maro tao Toamasina tao amin’ny Fitsarana. Ny 7 amin’ireo olona 11 voasambotry ny Fip tamina raharaha fanaovana vola sandoka, dia nahazo fahafahana vonjimaika avokoa rehefa tonga teny amin’ny Fitsarana.